Otu esi etinye VirtualBox na Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
October 1, 2021 September 18, 2021 by Jọshụa James
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta ka esi eme wụnye VirtualBox na sistemụ arụmọrụ Ubuntu 20.04 LTS yana imepụta igwe mebere ọhụrụ site na ọkọ.
Agbanyeghị, ọtụtụ ndị ọrụ na desktọpụ ga-eji Gosi Ngwa > Virtualbox
Imepụta na hazie VM ọhụrụ na VirtualBox bụ usoro kwụ ọtọ dị ka ndị a. Nkuzi a ga-emepụta VM na profaịlụ Linux maka ịmepụta Ubuntu 21.04 Desktop VM.
Kwụpụ 2. Maka nkuzi a, ekwuru na nhọrọ VM ga-abụ Ubuntu 21.04. Kpọọ VM gị, wee pịa "Ụdị Linux" ma ọ bụrụ na ahọpụtabeghị ya ozugbo maka gị họrọ "Ụdị: Ubuntu_64".
Kwụpụ 3. Window ọzọ ị ga-ahụ bụ họrọ Ebe nchekwa (RAM) nhọrọ. Ihe ndabara bụ 1024 MB; Agbanyeghị, maka ọtụtụ sistemụ, ị ga-achọ ịbawanye nke a. Ndụmọdụ dị mma bụ ileba anya na nkọwapụta min wee chọpụta oke ebe nchekwa VM OS gị ga-achọ ma ọ bụ gbasaa ruo oke dị mma.
Dị ka egosiri n'okpuru, igwe nkuzi nkuzi mụbara oke ya ruo 4GB. Ozugbo emechara, pịa Ọzọ > bọtịnụ.
Kwụpụ 8. Ị ga-abịa ugbu a na nyocha nke igwe mebere nke ị mebere ugbu a. Ị nwere ike gbanwee ntọala nke VM gị na nyocha a ugbu a na n'ọdịnihu. Mara, ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwe ntọala, a ga-emechi igwe mebere nke ukwuu.
Iji gaa n'ihu na nrụnye Desktọpụ Ubuntu 21.04, pịa na Malite bọtịnụ dị ka n'okpuru: